MCC ने’पालको हि’तमा छै*न : झलनाथ खनाल ! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
MCC ने’पालको हि’तमा छै*न : झलनाथ खनाल !
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एमसिसी अध्ययन कार्यदलले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) स**म्झौता यथास्थितिमा अनुमोदन नगर्न पार्टीलाई सुझाव दिएको छ ।
अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा सम्झौता नसच्याई संसदबाट अनुमोदन नगर्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिइएको हो ।
कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले एमसिसीको अहिलेको प्रावधानअनुसार अनुमोदन गर्न नसकिने जान’कारी दिए । एमसिसी सम्झौता नसच्याई अनुमोदन नगर्न आफूहरुले सर्वसम्मत सुझाव दिएको उनले बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका खनालले भने, ‘हामीले २० दिन लगाएर अध्ययन गर्यौं । अहिलेको अवस्थामा एमसिसी नेपालको हितमा छैन । अहिलेका प्रावधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र सम्प्रभूताविरुद्ध छ । त्यसैले यथाअवस्थामा अनुमोदन गर्न सकिँदैन ।’
एम**सिसीका विषयमा नेकपामा तीब्र विवाद भएपछि माघ १९ गते कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले २० दिनमा पार्टी अध्यक्षलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । खनाल नेतृत्वको कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्यद्वय भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य छन् ।
अब पार्टीको सचिवालय बैठकले एक दुई दिनभित्रै एमसिसी के गर्ने भन्ने विषयको टुंगो लगाउने छ ।
Previous बास्कोटाले हामिलाई हे*प्ने भन्दै सामाजिक अभियन्ता सुजन लिम्बु यसरी प्र’स्तुत भए !
Next पै’साले नयाँ सम्बन्ध बनाउँछ तर असली र पुरानो सम्बन्धलाई ध्वस्त बनाइदिन्छ: एक अध्ययन !